Key ကိုစက် | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan OEM ODM-keymachine.org
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ်-> ထုတ်ကုန်များ -> Key ကိုမိတ္တူပွားစက် -> Key ကိုစက်
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan Key ကိုစက် ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
multi-စက် duplicating အလုပ်လုပ်တဲ့သော့,နှစ်ဆအမျိုးမျိုးတို့ကိုကူးယူနိုင်ပါတယ်-grooved သော့ဘက်.
ကို C တပ်ဆင်ထား/W Tungsten carbide Cutter
လမ်းညွှန်ထိန်းညှိခြင်း Dial လွယ်ကူပြင်ဆင်ရေးအပေါ်ရှင်းလင်းမည်အနက်စံကိုက်ညှိ.
ဆုပ်ကိုင်ထားမှုကိုလက်ကိုင်ဘောလုံးကိုဆောင်သော device ကို get,တင်းကျပ်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စစ်ဆင်ရေး.
အပူတိုက်နယ်အနိုင်အထက်:တိုက်နယ် Overload ဖျူးသောအခြေအနေပေါ်တွင်မဆိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှောင်ရှားရန်, Power ကိုပိတ်ထား.
ဆုပ်ကိုင်ထားမှုကို 128mm သော့နှင့်နှစ်ဆခြမ်း grooved key ကိုမဆိုအမျိုးအစားမှမကုန်မှီတိုင်အောင်ကိုင်ရန်သင့်လိုအပ်ချက်ရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်4လမ်း.
သငျသညျ groove ဆုပ်ကိုင်ထားမှုကို၏ညာဘက်အနေအထားအပေါ် shouldered သော့နေရာသော့ချက် gauge ကိုသုံးနိုင်သည်
သော့ duplicating စဉ်ဆုပ်ကိုင်ထားမှုကိုသင်ပိုမိုတိကျသောတိုင်းတာတင်ပြ4လမ်းအသစ်ဒီဇိုင်း.
ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများလမ်းညွှန်ကိုအောက်တွင်တစ်ခုအပိုကိုပြုပြင်တာတွေဝက်အူသော့ duplicating စဉ်ပျက်စီးခံရဖို့မ Cutter နှင့်ဆုပ်ကိုင်ထားမှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြောသည်ပါပြီ.
အဆိုပါဆုပ်ကိုင်ထားမှုကို 128mm သော့ပွားနှင့်အထူး/အဘယ်သူမျှမပို adapter လိုအပ်ကြောင်းပုံမှန်မဟုတ်သောသော့.ထွ.semi-မြို့ပတ်ရထားသော့ချက်,ရင်ပြင်သော့ချက်,round ရိုးသော့ချက်.
ရှုထောင့်：360 မီလီမီတာ(W က)*310mm(: D)*240mm(H ကို)
N ကို.W က.20 ကီလို
, G.W က.22 ကီလို
110V သို့မဟုတ် 220v,50 Hz သို့မဟုတ် 60 Hz